Lozam-pifamoivoizana mahatsiravina: fiara 4×4 nifaoka olona roa, iray maty, iray tapa-tongotra | NewsMada
Par Taratra sur 10/07/2020
Maty tsy tra-drano ilay lehilahy mpitondra posy, raha naratra mafy tapa-tongotra kosa ny olona faharoa, nitondra moto. Fiarakodia 4×4 voalaza fa niromorimo mafy no nifaoka ireto niharan-doza ireto, tao Toamasina, amin’ny lalana hihazo ny Hopitalibe, afakomaly.
Teratany karana, mpandraharaha mpivarotra « fripérie », araka ny fantatra, ny nitondra ilay fiara 4×4 nitera-doza ity. Raha ny filazan’ireo vavolombelona nahita ny fitrangan’ny loza, nirimorimo loatra ity fiara tsy mataho-dalana nifaoka ireto olona roa (mpitarika posy sy mpitondra moto) ireto ity. Toa tsy nahafehy intsony ny familiana fiara ilay Karana, raha ny fa­hitan’ireo nanatri-maso. Re­hefa avy nifaoka iretsy olona roa iretsy ilay fiara, voalaza fa nivadibadika inefatra vao tafajanona. Potika tanteraka, araka izao hita amin’ny sary izao, ny tapany aloha amin’ ilay 4X4.
Mafy tokoa, araka ny izany, ny dona nahazo ireto roa lahy niharan-doza. Mafi­mafy kokoa anefa ny nahazo ilay lehilahy mpitarika posy, ary nitarika ny fahafatesany teo no ho eo izay. Avotra soa aman-tsara ihany kosa ny ain’ilay mpitondra moto, saingy ta­paka ny ranjony.
Tsy tompon’ny tenany?
Araka ny filazan’ireo na­natri-maso ity lozam-pifamoivoizana nahatsiravina tao Toamasina ity, hita ho toa tsy tompon’ny tenany izany ilay Karana nitondra ilay 4×4. Mamo sa nandray zava-ma­hadomelina? Asa fa ho hita eo ny tohin’ny fanadihadiana sy ny famotorana ataon’ny polisy efa mandray an-tanana ny raharaha.
Raha ny antotanisa voaray avy ao anivon’ny sampana vonjy taitra, ao amin’ny Hopitalibe, fantatra fa niakatra ny tahan’ny lozam-pifamoivoizana tao an-drenivohitr’i Toamasina, nandritra izao fihibohana izao. Fanta­tra ihany koa fa vokatry ny fandraisana zava-mahamamo avokoa ny antony nahatonga izany. Eo koa ny fahitana na fanararaotana ny lalana mala­laka ka mahatonga ny mpamily fiara halaim-panahy handeha mafy.